महा मारीमा पनि सरकारले किन खुलाउंदैछ वैदेशिक रोजगारी ?? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/महा मारीमा पनि सरकारले किन खुलाउंदैछ वैदेशिक रोजगारी ??
काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि फेरि खुला गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको शुक्रबार बसेको बैठकले विदामा आएका साथसाथै नयाँ रोजगारीमा जान पनि दिने निर्णय गरेको हो ।
संक्रमितको संख्या बढेसँगै नयाँ स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पेश गरेको योजना स्वीकृत गरिएको छ । स्थानीय तहमा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय सिसिएमसी बैठकले गरेको छ । यो रकम प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने छ ।
देशभरका क्वारेन्टिन स्थल सुधार गर्ने र दुई साताभित्र परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको अनुगमन तथा सहजीकरणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापन पनि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने छ ।